Qoondaynta Miisaanka Duufaanta Saffir-Simpson cusub | Saadaasha Shabakadda
Xarunta Qaranka Mareykanka ee Duufaanta (NHC) ayaa soo saartay a wax ka beddelid gudaha Saffir-Simpson Qiyaasta Duufaanta, kaas oo cabiraya xoojinta dabaylaha duufaanada kulaylaha markay gaadhaan heerka duufaanka. Qiyaastani waxay u dhaxeysaa 1 (xooga hoose ee dabaylaha) ilaa 5 (xooga badan ee dabeylaha sidaas darteedna wuxuu gaarsiisan yahay heerka waxyeelada).
Wax ka beddelkan waxaa loo sameeyaa si loogu beddelo unugyada cabbiraadda ee loo isticmaalo in lagu qiyaaso xawaaraha dabaysha si fudud. Maaddaama kiiloomitir saacaddiiba (Km / h), guntin (kt) iyo mayl saacaddiiba (mph) inta badan la isticmaalo, cabirkii hore wuxuu ahaa marin habaabin markii la soo koobayay qiyamka xawaaraha dabaysha xuduudaha u dhexeeya qaybaha kala duwan.
Sida ay tilmaameen Xarunta Duufaanta Qaranka Qiyaasta cusub waxay shaqeyn doontaa laga bilaabo 15-ka Maajo, 2012, ee Badweynta Baasifigga, Woqooyi-Bari Baasifiga iyo Gacanka Kaliforniya, halka laga isticmaali doono laga bilaabo 1-da Juun, 2012 ee Badweynta Atlantik, Gacanka Mexico iyo Badda Caribbean-ka.
Kala soocida cusub, qaybaha 1 iyo 2 isma bedelin. Qeybta 3 waxaa hadda lagu gaari doonaa dabaylo isdaba joog ah oo ah 96 illaa 112 kt (ama 111 illaa 129 mph ama 178 to 208 km / h). Qaybta 4 ayaa la duubi doonaa haddii xoojintu u dhexeyso 113 ilaa 136 kt (130 illaa 156 mph ama 209 ilaa 251 km / h). Ugu dambeyntiina, qaybta 5 waxaa lagu cabbiri doonaa dabaylo u dhexeeya 137 kt ama ka badan (157 mph ama ka badan ama 252 km / h ama ka badan).
Xarunta Duufaanta Qaranka waxay ku muujisay bayaanka kor ku xusan in duufaannadii hore ee taariikhda aysan wax dhib ah soo gaari doonin wax ka beddel la'aan Marka laga hadlayo xooga dabaylaha ay ku dhufteen dhulka, taasi waa, xaaladdan cusub waxay ansax noqon doontaa xilliyada soo socda ee duufaannada cusub.
source: Cafis dabaysha
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Qoondaynta cusub ee cabirka duufaanka Saffir-Simpson
Dhig xiriiriye boggan si aad ugu celiso saaxiibkaa Miisaanka Simpson